कार्तिक २४ गते सोमबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल – Sanjal Nepal
Homeराशिफलकार्तिक २४ गते सोमबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
कार्तिक २४ गते सोमबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
November 9, 2020 admin राशिफल 3621
आगामी ३ दिनभित्र पर्ने चाडपर्व, उत्सव र मुहूर्तादिको विवरण :–
२४ गते : मूहुर्त : अग्निवास(सामान्य यज्ञ र हवन गर्न मिल्ने दिन), कलशचक्र, २५ गते : भद्रा करण दिनको ११।३१ बजेदेखि राती १०।३८ बजेसम्म, महागुरु फाल्गुनन्द जयन्ती, मूहुर्त : कलशचक्र, २६ गते : श्री रमा एकादशी व्रत, मूहुर्त : रुद्राभिषेक(शिववास जुरेको, रुद्री÷पूजा गर्न मिल्ने दिन), अग्निवास(सामान्य यज्ञ र हवन गर्न मिल्ने दिन), शिलान्यास (सामान्य), घर छाउने÷ढलान गर्ने, डेरा सर्ने, दैलो राख्ने, कलशचक्र,
विगतका निर्णयले काम बिग्रन सक्छ । मान्यजनको सुझाव प्रति पनि विश्वास नलाग्ला । होश नपुग्नाले खर्च मात्र हुनेछ। प्रलोभन देखाउनेहरूले फसाउन सक्छन् । बाध्यतापूर्ण काममै समय बित्न सक्छ । सहयोगको आशा देखाउनेहरूबाटै धोका पाइएला ।
सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन् । रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ । व्यापारमा पनि राम्रै फाइदा हुनेछ । काममा मातापिताको सहयोग प्राप्त होला । अतिथिको सम्मान गर्ने अवसर पाइएला । मेहनतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
काममा परिवारजनको सहयोग जुटाउन सक्दा फाइदा होला । पशुधन र जमिनबाट सामान्य लाभ मिल्नेछ । प्रतिष्ठा कमाउने काम गर्ने मौका छ । अरूलाई प्रभावित पारेर काम लिन सकिने छ । आफ्नो प्रतिभा अरूलाई देखाउन सकिनेछ । गुरुजनको विशेष सहयोग जुट्नेछ ।
बोलीको गलत अर्थ लाग्ने र लेनदेनमा विवाद बढ्ने सम्भावना छ । सहयोगीहरूले पनि त्यत्ति साथ नदेलान् । भेटघाटमा अलमलिनाले काममा बाधा पुग्नेछ । आश्वासन दिनेहरूले झुक्याउन सक्छन् । स्वास्थ्य कमजोर रहनाले सोचेजति काम गर्न नसकिएला ।
शुभचिन्तकहरूले आफ्ना कमजोरीप्रति गुनासो गर्न सक्छन् । स्वास्थ्यका लागि खानपानमा सचेत रहनुहोला । यावसायिक काममा राम्रै फाइदा मिल्नेछ । लामो समयदेखि रोकिएको काम बन्नेछन् । बौद्धिक कार्यबाट धन लाभ हुनेछ । प्रयत्न गरेका काम ढिलै भए पनि पुरा हुनेछन ।
प्रशस्त धन आर्जन गर्ने मौका छ। बिनाप्रतिस्पर्धा फाइदा हुने योग छ । आफ्नै कमजोरीले विवादमा परिनेछ भने सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई फाइदा हुनेछ । प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो बनाउनेछ । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ ।
नयाँ जिम्मेवारी पाइएला । पारिवारिक आवश्यकता पूर्ति होला । श्रमको उचित मूल्यांकन हुनेछ । शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई वेवास्ता नगर्दा दुःख पाइनेछ । परिवारजनबाट टाढिनुपर्ला । कामका लागि गरिएको भ्रमणमा समय मात्र बित्नुका साथै समस्या थपिन सक्छन् ।
पठन पाठनमा त्यति समय दिन नसकिएला । अरूले आलोचना गर्न सक्छन् । खर्च गरेर पनि त्यति फाइदा उठाउन नसकिएला । प्रयत्न गर्दा पनि उपलब्धि हासिल गर्न गाह्रो पर्ला । सानातिना काम र घरेलु समस्यामै अल्झनुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्यगत समस्याले पनि सताउने देखिन्छ ।
काममा रोकावट र मान सम्मानमा आघात पुग्ने समय छ । रुपैँया पैसा कमाउने बेला छ । सोच्दै नसोचेको काम सम्पादन हुने समय छ । विद्यामा कमजोरी र लेनदेनमा विवाद होला । व्यावसायिक काममा पनि विभिन्न समस्या आउन सक्छन् ।
उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ । शत्रु र प्रतिस्पर्धीलाई सजिलै हराउन सकिनेछ । सोचेभन्दा बढी नै लाभ हुने समय छ । साझेदारी काममा विशेष लाभ मिल्नेछ । भौतिक साधन जुट्नेछन् र दिगो फाइदा हुने काम सुरु हुन सक्छ । यात्राको पनि योग छ ।
तपाईंको कमजोरीमाथि टिप्पणी हुन सक्छ, सचेत रहनुहोला । विगतको कामबाट भने लाभ हुनेछ । सामाजिक क्षेत्रमा अग्रसर हुने दिन छ । वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिको उपयोगबाट प्रशस्त लाभ उठाउन सकिनेछ । दाम्पत्य जीवन रमाइलो रहनेछ । आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ ।
गरिएका कामको उचित प्रतिफल पाइनेछ । कृषि चौपायामा केही समस्या देखिएला । अवसर आए पनि समयमा निर्णय लिन नसक्दा पछि परिनेछ । मौकाको फाइदा उठाउन नसकिएला । व्यावसायिक काममा खर्च बढ्नेछ । अरूका काममा महत्वपूर्ण समय बित्न सक्छ ।
विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि पार्वती जस्तै श्रीमती भए कसरी जीवन फेरिन्छ ? जसका श्रीमान अरबमा थिए -हेर्नैपर्ने (भिडियो सहित)
म पनि महिला हुँ तर श्रीमानलाई बिगार्ने महिलाहरु नै हुन्
यस्तो छ तपाईको मंगलबारको राशिफल, पाथिभरा माताको दर्शन गरी बैशाख १४ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
April 27, 2021 admin राशिफल 1332
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल बैशाख १४ गते मंगलबार इश्वी सन २०२१ अप्रिल २७ तारीख चैत्र शुक्लपक्ष पुर्णिमा तिथी स्वाती नक्षत्र सिद्धि योग बालव करण चन्द्रमां तुला राशिमा आनन्दादि योगमा ध्वज योग राक्षसनाम संवत्सर
आजको राशिफल वि.सं. २०७७ पौष २२ गते बुधबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
January 6, 2021 admin राशिफल 1872
श्री बुधाष्टमी व्रत, अष्टका श्राद्ध, पूपाष्टक, कालाष्टमी,, आजको मूहुर्त : रुद्राभिषेक(शिववास जुरेको, रुद्री÷पूजा गर्न मिल्ने दिन), अग्निवास(सामान्य यज्ञ र हवन गर्न मिल्ने दिन), शिलान्यास (सामान्य), वस्त्राभरण(गुन्युचोलो), आगामी ३ दिनभित्र पर्ने चाडपर्व, उत्सव र मुहूर्तादिको विवरण
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, माघ २८ गते बुधबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
February 10, 2021 admin राशिफल 6695
श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल माघ २८ गते बुधबार इश्वी सन २०२१ फेब्रुवरी १० तारीख माघ कृष्णपक्ष चतुर्दशी तिथी उत्तरषाढा नक्षत्र व्यतिपात योग भद्रा करण चन्द्रमा मकर राशिमा आनन्दादि योगमा वज्र योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य
LEX 18 agenda conversation: Job club (501882)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (473519)
Hello world! (399736)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (364932)
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? (142720)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (123702)
Technology Training Company Coding Dojo to Open Boise Campus at Trailhead (106429)
Brody king On Why He Wouldn’t depart His full Time Job To signal With WWE (100808)
दैविक शक्ति अकला देवी मन्दिर जहाँ आफै शंखघण्ट बज्छ (85424)
खेतमा भेटियो रहस्यमय डल्लो, जाँच गर्दा यस्तो सनसनीपूर्ण खुलासा (84566)